Kuzogcinwa amasokhethi ama-CPUs, ithi i-Intel ne-AMD | Kusuka kuLinux
Amasokhethi ama-CPU azogcinwa, yisho i-Intel ne-AMD
Ukulandelela iposi ukuthi sishicilele ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngokushiya kwe-Intel ama-CPU apakishwe nge-LGA, namuhla sivuselela isimo, nalokho okubonakala kuyizindaba ezinhle:
Usuku lokugcina 4, TechReport kunanela izitatimende zikaChris Hook, oyi-Chief Product Opinion Officer ne-Chief Communications Officer yakwa-AMD, lapho akuqinisekise khona lokho I-AMD ibizoqhubeka nokufaka ama-CPU kumasokhethi nokuthi "lokho kuzoqhubeka kuze kufike ku-2013 nango-2014 ngama-'Kaveri 'APU kanye nolayini be-'FX' bama-CPU." Kuhle kusuka ku-AMD, kuletha ukuthula kwengqondo kubasebenzisi bayo nokufinyelela kumakhasimende we-Intel.
Yebo, ngokusho kweyodwa noticia uvele ezinsukwini ezimbili ezedlule ku- Ubuningi bePC, Ekugcineni U-Intel wakuphula ukuthula, ukuqinisekisa ukuthi lizoqhubeka nokuhlinzeka ngama-CPU esokhethi "ngekusasa elibonakalayo," ngamazwi omkhulumeli we-Intel uDaniel Snyder, owathi "... yize i-Intel ingaphawuli ezinhlelweni zomkhiqizo wesikhathi eside ...", "I-Intel isazibophezele ekukhuleni kwabathanda ideskithophu neziteshi futhi isazoqhubeka nokuhlinzeka ngezingxenye zokupakisha kwe-LGA…"
Ngalezi zitatimende i-Intel izama ukwehlisa umoya oshisayo ngalokhu okuveziwe futhi okuthiwa kuqinisekisiwe ngale ndaba nokugwema okunye ukuqagela okungenzeka okuqeda ukuthandwa kwayo phakathi kwabathandi be- "Do it ngokwakho". Lokho abaningi abazibuza manje ukuthi: lisho ukuthini ngempela "ikusasa elibonakalayo" ku-Intel? Ngiyethemba ukuthi isikhathi sizophendula lo mbuzo ukuze kuzuze abasebenzisi, okungenani ngizohlala ngisesikhathini.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Amasokhethi ama-CPU azogcinwa, yisho i-Intel ne-AMD
Kungenzeka yini ukuthi baphenduka? haha
Into ephephe kakhulu ukuthi lapho bebona ukusabela kwabasebenzisi abaningi bacabanga kabili.
Ngicabanga ukuthi bemi ngxi ngokwesaba ukuphendula abasebenzisi ababenakho ...
Njengoba ngifunda angikhumbuli ukuthi, ngokusobala i-LGA yayizohlala KUPHELA kuma-CPU asezingeni eliphezulu, kodwa ngiyaphinda ngithi, ngiyifunde laphaya.
izindaba ezinhle vele
Ngisemuva komthombo wamahemuhemu emphakathini waseHackintosh mayelana nokuthengwa okungenzeka kwe-AMD yi-Apple, ngoba abokugcina bafuna ukwenza ama-CPU abo bese bevalelisa kulawo we-Intel. Amahemuhemu okuqala ukuthuthela esakhiweni seSoc naso esincike ku-ARM, kanti okunye ukuthenga i-AMD futhi sisebenzise kokubili ukukhiqizwa kwe-CPU ne-GPU (okwamuva kubanikeze imiphumela emihle kumagajethi abo).
Uma la mahemuhemu eyiqiniso kusho ukuthi "Bayasibamba savuma."
Lokho kufanele ukhathazeke ngakho, ngoba manje ngizoqala ukufuna imininingwane futhi ngihlale ngisesikhathini; Ngiyethemba futhi kumane kuyinhlebo ngoba uma kuyiqiniso bekungaba yingozi kuwo wonke umuntu.
Yebo, uma benza, isikhathi manje ukuthi i-amd ivila. Kepha kunginika ukuthi bazodubula ngengalo ezobanika injabulo ethe xaxa kumaselula nakuthebulethi.
Iskripthi sokuhlola okuqukethwe kumadivayisi we-USB bese ukukopisha ku-PC
UGuix: umphathi wephakeji omusha jikelele